Yakanakisa Forex Brokers 2022 & Cryptocurrency Exchanges
Yemahara Demo Account
Vazhinji Vanovimba Mabhuroka
Mabhuroka Kune Vanotanga
Zero Kuparadzira Brokers
Yakagadziriswa Nguva Yekutengesa
Yakanakisa Scholarship ye2022
Tenga BTC neKadhi
Tenga BTC Anonymous
Kutya uye Makaro Index
Yakanakisa Ethereum Wallet
Yakanyanya Bitcoin Wallet
Yakanyanya Litecoin Wallet
Zviratidzo & Robhoti
Tsvaga yakakunakira broker
Isu takatsaurirwa kuunza vatengesi unbiased bhuroka ongororo kuti tivabatsire kuwana akanakisa Forex bhuroka, mabhinari sarudzo uye cryptocurrency kuchinjanisa kune avo ekutengesa online zvavanoda.
Tine akawanda akadzama mabroker wongororo, zviyedzo uye chishandiso chekuenzanisa chekubatsira vatengesi nekukurumidza uye nyore kuona mabroker akanakisa kune zvavanoda ivo pachavo.
*Mhoro yako inogona kunge iri panjodzi
Kudyara mu Forex, CFD uye FX sarudzo dzinosanganisira yakakura njodzi yekurasikirwa uye haina kukodzera kune vese vanoisa mari.
Minimum deposit yekupinda
Zvishandiso zvakawanda zvekudzidzisa
Ona Zvino!Olymp Trade TestOna Zvino!Olymp Trade Test
Zvinopfuura 100 zvinhu zvekutengesa
Mubairo-kuhwina yepamusoro-tech chikuva
Ona Zvino!Derive TestOna Zvino!Derive Test
Kusarudzwa kukuru kwezviridzwa zvekutengesa
Ona Zvino!AvaTrade bvunzoOna Zvino!AvaTrade bvunzo
Ona vese vatengesi
Broker wongororo yekutengeserana
Chikwata chedu chakadzidza mazana emabhuroka uye chinokuunzira ruzivo rwakakosha mune kompakiti asi yakadzama ongororo yekukubatsira iwe kuita sarudzo ine ruzivo yekusarudza akanakisa ekutengesa bhuroka kune zvaunoda iwe pachako.
Chii chinonzi mabroker?
Anotengesa bhuroka murevereri anobvumira vatengi kutenga uye kutengesa zviridzwa zvekutengesa nemari diki yekomisheni. Ivo vanopa vatengesi uye vanoisa mari mukana wekuwana mapuratifomu kuitira kuti vatengese mumisika dzakasiyana senge Forex, Stocks, Commodities, Cryptomanes, Ramangwana, Indices, Simbi, Simba, Sarudzo, Bond, ETFs, CFDs, nezvimwe. izvo zvinopa musanganiswa wezviridzwa zvemari.
Pamusoro pekupa maakaundi ekutengesa uye mapuratifomu, mabroker aya anowanzo kupa akasiyana-siyana masevhisi ebrokerage, anosanganisira zvekudzidzisa, maturusi ekutengesa, kuongororwa kwemusika, maapplication ekutengesa, mapuratifomu ekutengesa magariro, nezvimwe.
Nzira yekutengesa online?
Kutengeserana pamhepo kunosanganisira kuisa mari muzvigadzirwa zvemari uchishandisa chikuva chekutengesa chinopihwa nefemu yebrokerage iyo ichapa akasiyana siyana misika nemidziyo.
Paunenge uchitengesera pamhepo, uri kutenga (kuenda kure) kana kutengesa (kuenda kupfupi) zviridzwa zvemari uye uchifungidzira kuti mitengo ichakwira here kana kudzika kuyedza kuita purofiti kubva mukufamba kwemusika. Mutengesi anoita semurevereri pakati pemutengesi nemisika yavanenge vachitengesera.
Kutengesera pamhepo kunowanikwa zviri nyore, chero munhu ane internet yekubatanidza anogona kuvhura account yebrokerage uye kutengeserana online kuburikidza nedesktop, webhu uye nharembozha dzekutengesa zvemagetsi mapuratifomu.
Iyo Forex musika inodzorwa sei?
Musika we Forex unodzorwa nemutemo munyika dzakawanda pasirese. Izvi zvinodikanwa kudzikisa mukana wekubiridzira kune chikamu che Forex broker uye kuchengetedza capital yemari.
Kuti upinde mumusika weinterbank, broker anongoda kunyoresa sesangano rinopa masevhisi emari.
Ndokureva kuti, kupihwa rezinesi kwe Forex broker hakusungirwe. Asi vatengesi vanoronga kushanda vakatendeseka vanotarisa kuti vawane rezinesi, nokuti inopa vashandisi chivimbiso chekuvimbika nekudzivirira.
Chokwadi, kuti uwane rezinesi, broker anofanirwa kuzadzisa akati wandei mamiriro akaoma: kuongororwa kwakaringana, kuronga homwe yemuripo, kuchengetedza mishumo yakajeka, nezvimwe. Marezinesi ebroker akakamurwa kuita akati wandei.
US Derivatives Exchange Commission (CFTC) uye US National Futures Association (NFA). Aya ndiwo masangano anonyanya kudiwa, anonyatso gadzirisa basa remabhuroka avo, saka vatengesi vane marezinesi akadaro ndivo vanovimbika.
Iyo UK's Financial Regulatory Authority (FSA) neAustralia Securities and Investments Commission (ASIC). Pano, zvinodiwa pakupa rezinesi zviri nyore zvishoma, asi kazhinji zvakaoma kuwana.
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) uye Malta Financial Services Authority (MFSA). Kushuma kuri nyore uye kutonga kwese hakuna kusimba kumasangano aya. Nekudaro, marezinesi avo anopihwa chete kune vanovimbwa bhuroka.
British Virgin Islands Financial Services Commission (FSC BVI) uye Belize's International Financial Services Commission (IFSC). Masangano aya haadi bhuroka muhofisi yavo inomiririra, asi anogaroongorora.
Chikamu chechishanu nechitanhatu
Seychelles Financial Services Authority (SFSA) uye Saint Vincent uye Grenadines Islands Financial Regulatory Authority (SVG FSA). Ivo vanoratidza yakareruka rezinesi system uye yakaderedzwa mwero wekutonga.
Vagadziri ava vanopihwa semuenzaniso; chokwadi, kune zvakawanda. Sarudzo yakanakisa ndeyekusarudza broker ane mabasa anodzorwa netier 1 kune 4 masangano; ndivo vakavimbika zvikuru.
Asi pane imwezve tsanangudzo. Territorially, mutongi ane simba repamutemo chete pamiganhu yenyika yake. Izvi zvinoreva kuti kana, semuenzaniso, mugari weEuropean Union achishanda muEU, vatungamiriri veEU chete vanogona kuvadzivirira.
Chii chinonzi broker akavimbika?
Paunosarudza Forex broker, zvakakosha kuti urege kuwira kune scammer, iyo inonzi "bucket shop" kana "hapana kero" kambani.
Kuti tikubatsire kuona mutsauko pakati peasina kutendeseka uye akavimbika bhuroka, taona akati wandei zviratidzo zveasina kutendeseka broker uye akavimbika broker:
akavimbika bhuroka scammers
Ruzivo rwekambani runoratidza zvese zvakanakira nezvayakaipira; bhuroka inoshanda nevose vanotanga uye nevatengesi vane ruzivo Ndinosarudza kushanda nevatengesi vekutanga, zvinhu zvakawanda zvekusimudzira zvevanotanga
Makomisheni uye kupararira zvinoratidzwa zvakajeka Makomisheni akavanzika uye mubhadharo
Hapana kutsvedza kana kusashanda Matambudziko neanoshanda scalping, sevha inoomesa, kazhinji inotsvedza
Mutengi sevhisi agile, vanopa mazano vanokwanisa Tsigiro yemutengi yakanyarara, hapana kukurumidza kugadzirisa kunogoneka
Kubviswa kwemari kunoitwa nekukurumidza Mhinduro yemutengi inogara iine matambudziko nekubvisa mari
Kambani ine nhoroondo refu, capitalization hombe, rezinesi uye nhamba huru yeongororo yakanaka Iyo kambani ichangobva kugadzirwa, mavambo uye saizi yeguta rakatenderwa hazvizivikanwe, rezinesi harisati raburitswa, zvakataurwa nevatengi hazvina kunaka kana zvakataurwa zvakanaka asi zvakanyorwa sekunge "carbon copy"
AvaTrade chikamu chedu runyorwa rweakanakisa ekutengeserana nzanga mapuratifomu sezvo ichipa vatengesi akawanda akananga uye asina kunanga magariro ekutengeserana mapuratifomu.
AvaTrade yakabatana nevamwe veakanakisa masaini vanopa pasi rose kuona kuti vatengesi vanogona kutevera vatengesi vepamusoro pese pavanenge vari.
Ivo zvakare vanopa-yega-inotungamira kutengeserana pamapuratifomu ekutengesa anonzwisisika pane akasiyana-siyana anopfuura mazana maviri nemakumi mashanu ekutengesa zviridzwa zvinosanganisira forex, CFDs uye cryptocurrencies.
AvaTrade social trade platforms anosanganisira:
Mirror Mutengesi - Nakidzwa nemanyorero, semi-otomatiki kana otomatiki kutengesa nekutevera vaunofarira masaini vanopa. Iwe unogona zvakare kukopa algorithmic yekutengesa nzira dzakagadzirwa nevatengesi vane ruzivo pamwe chete nevanotungamira vanogadzira.
ZuluTrade -Sarudza kubva pahuwandu hukuru hwevanopa masaini, vakaiswa pachishandiswa akasiyana siyana anoshanda paramita, kusanganisira yakanyanya kudhirowa uye avhareji pundutso.
AvaTrade ndeimwe yemabhureki makuru epasirese pasirese maererano nehuwandu hwekutengesa. Iwo anodzorwa munzvimbo 6 dzinokatyamadza dzinosanganisira Europe, Australia neSouth Africa. Marezinesi ayo ekutonga anosvika makondinendi mashanu. Izvi zvinovimbisa kuti iwe unogona kuita kutengeserana kwakachengeteka uye kwakachengeteka munzvimbo yakazara yekutengesa yavanopa.
AvaTrade inopa akasiyana siyana akasiyana ekutengeserana emagariro mapuratifomu pamwe nemari yemakwikwi, indasitiri inotungamira yekutengesa zvivakwa uye yakanakisa rutsigiro rwevatengi.
Nekuda kwezvikonzero izvi nezvimwe, ivo vanove nyore nyore edu epamusoro ekutengeserana emagariro mapuratifomu.
Zvinopfuura 250 zvekutengesa zviridzwa
Maturusi emahara ekutengesa uye zviratidzo
Regulation mumatunhu matanhatu
yakanakisa mutengi rutsigiro
Minimum deposit ye ​​$100
Vese Vatengesi ve Forex Vanoda Kuongorora Zvinotevera Zvinhu:
Trading Parameters: Panofanirwa kuve nenhamba huru yemidziyo yekusarudza kubva, ine akawanda akasiyana emazuva ekupera ekusarudza kubva. Panofanira kunge paine zviridzwa zviviri zvakasiyana zvekusarudza kubva, kunyangwe mabroker mazhinji achipa zvinopfuura izvo.
Platform Mitauro: Isto será mais importante do que alguns do que outros. Todas as plataformas são fornecidas em inglês, mas as opções linguísticas adicionais podem variar muito. Verifique se 'webhusaiti' ea plataforma são fornecidos no seu idioma nativo.
Minimum deposit: Oo é o custo para começar a negociar? Os corretores não cobram taxas por negociação, pelo que todos os fundos depositados podem ser utilizados para negociar. O depósito mínimo médio é entre $ 10 e $ 300. Qualquer montante que yakabatsira iscaado acima da média.
Zvekubhengi Sarudzo: Wako banking nzira inodiwa inopiwa? Uyu mubvunzo unofanirwa kupindurwa pakutanga kwekuongorora, nekuti kana zvisiri, iwe uchafanirwa kutsvaga imwe bhuroka.
Mabhonasi uye Mashambadziro: Mabhonasi anosvika ku100% anopihwa nevamwe vatengesi. Izvi zvinouya nezvisungo zvinofanirwa kusangana zvisati zvabvisa. Kunyangwe zvakadaro, mabhonasi uye kumwe kukwidziridzwa kunogona kupa account mari kukurudzira kwakanaka.
Rutsigiro rwevatengi: It is gestor de conta dedicatedado pode ou não ser fornecido, mas todos os wafanyers devem ter acesso a apoio ao cliente. Sezvinotariswa iraa incára os métodos de contato disponíveis e horas durante as quais o apoio é prestado.
Sa escolhas de vatengesi iripo ichasanganisira makambani matsva uye akasimbiswa. Mazhinji anodzorwa, nepo mamwe asingagone kuve nekuda kwenzvimbo yavo.
Ichokwadi chinopupurirwa kuti avo vanoshanda neakakura broker vanowanzo tambira zvakanyanya uye vanoona mashoma mashoma ematambudziko.
Kunyange iwe ungave uchifarira kutanga, kune zvakawanda zvinobatsira kutora nguva yekusarudza yakanyanya kunaka. broker zve Forex.
Chii chinonzi Forex musika?
Uyu ndiwo musika wekuchinjana kune dzimwe nyika unounza pamwechete mashandiro emari emabhanga ese nemasangano epasi rese. Hurongwa hweupfumi hwenyika hwakakura huripo kumunhu wese.
Nzira yekutanga kutengesa pa Forex?
Sezvo munhu asingakwanise kuita chikamu chemusika, mutengesi anofanira kunyoresa ne Forex broker. Iyo broker inopa mutengesi neyekutengesa terminal, maturusi ekutengesa uye ese Forex ekutengesa mikana.
Pane chero nzira dzemari dze Forex?
Ehe. Mutengesi anogona kuisa mari nenjodzi shoma muPAMM/LAMM maakaundi, ayo anotungamirwa nevatambi vemusika vane hunyanzvi. Kune zvimwe zvinhu zvakaita se trust management uye kopi yekutengesa masevhisi.
Yakachengeteka sei iyo Forex musika?
Sezvo kutengeserana kunoitwa zvinoenderana nerudzi rwemariji, panogara paine njodzi uye pakutanga yakanyanya kukwirira. Asi vatengesi vanopa akati wandei mikana inoshanda yekusiyanisa njodzi, semuenzaniso PAMM portfolio. Zvakare, mari yemuripo wechimbichimbi.
Gamuchira mapepa enhau
Vatengesi vakanyorwa pawebhusaiti vakapfuura nekutsvaga kwakawanda uye kuongorora kwakadzama.
Chinangwa chedu ndechekupa ongororo dzisina kurerekera pamabhurocha ekutengesa epamhepo kupa vatengesi kunzwisisa kwakajeka kweakasiyana mabroker aripo. Vatengesi vanogona kushandisa sevhisi yedu yemahara, asi ivo vanofanirwa kuita yavo yekushingairira uye kuita sarudzo yavo pakusarudza online yekutengesa bhuroka inoenderana nezvido zvavo.
Nepo mazhinji edata redu akasimbiswa zvakanangana nemabhuroka aya, anogona kusiyana nguva nenguva. Isu hatina mhosva yeruzivo rusina kururama kana rwechinyakare muongororo yevatengesi vedu vepamhepo uye iwe unofanirwa kusimbisa data rese zvakananga nemutengesi. Mareti, mazwi, zvigadzirwa uye masevhisi pane wechitatu bato mawebhusaiti anogona kuchinja pasina chiziviso.
Forexdigital.net ndeyezvinangwa zveruzivo chete uye haina kuitirwa kugovera kana kushandiswa nemunhu chero upi zvake munyika chero ipi zvayo kana hutongi uko kugovera kwakadaro kana kushandiswa kungapesana nemutemo wenzvimbo kana mutemo. Iyi webhusaiti haipe zano rekudyara, uye hachisi chekupa kana kukumbira chero mhando kutenga kana kutengesa chero zvigadzirwa zvekudyara. Tinogona kubhadharwa kuburikidza nevashambadziri vebato rechitatu. Muripo uyu haufanirwe kuonekwa serumbidzo kana kurudziro ne forexdigital.net, uye haifanire kukanganisa chiyero chebroker.
MaCFD, Forex, Cryptocurrencies uye zvimwe zviridzwa zvemari zvinotakura njodzi huru yekurasikirwa nemari nekukurumidza nekuda kwekuwedzera. Vese vanopa vane chikamu chikuru chevatengesi vemaakaunti vanorasikirwa nemari kana vachitengesa maCFD uye zvimwe zviridzwa zvemari nemakambani avo. Iwe unofanirwa kufunga kana iwe uchinzwisisa mashandiro anoita maCFD, Forex, Cryptocurrencies uye kana iwe uchigona kurasikirwa nemari yako. Usambofa waisa mari yausingakwanise kurasikirwa nayo.
Copyright © 2022 - Forexdigital.net Kodzero dzese dzakachengetwa.
SEVISA UYE BVUMA